इनबाउन्ड मार्केटिंग चेकलिस्ट: विकासको लागि २१ रणनीतिहरू Martech Zone
तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, हामी मा इन्फोग्राफिक्स प्रकाशित गर्न धेरै अनुरोध प्राप्त Martech Zone। हामी प्रत्येक हप्ता इन्फोग्राफिक्स साझा किन गर्छौं। हामी अनुरोधहरू पनि बेवास्ता गर्दछौं जब हामी इन्फोग्राफिक्स पाउँछौं कि केवल कम्पनीले मूल्यको इन्फोग्राफिक बनाउनको लागि ठूलो लगानी गरेको छैन भनेर देखाउँदछ। जब मैले यस इन्फोग्राफिकमा ब्रायन डाउनअार्ड, को-फाउंडरका क्लिक गरे ELIV8 व्यवसाय रणनीतिहरू, मैले तिनीहरूलाई चिन्न सके पछि उनीहरूले गरेको अन्य कामहरू पनि साझा गरे।
यो इन्फोग्राफिक; यद्यपि, पूर्णताको कम पनि छैन! ब्रायन र उनको टोली प्रकाशित एक व्यापार वृद्धि हासिल गर्न मा नयाँ इन्फोग्राफिक इनबाउन्ड मार्केटिंगको साथ जुन मूल्यवान, सुन्दर छ, र प्रत्येक रणनीतिलाई ब्याक अप गर्न मौलिक तथ्या .्कहरू प्रदान गर्दछ। ब्रायन र उसको टोलीले एकीकृत परामर्श र मार्केटिंग सेवाहरू प्रदान गर्दछन् उद्यम ग्राहकहरूको प्रभावशाली एर्रेमा।
इनबाउन्ड मार्केटिंग भनेको के हो?
इनबाउन्ड मार्केटिंग एक रणनीति हो जसले सम्भावितहरूलाई आकर्षित गर्न र अनलाइन कम्पनीहरूमा रूपान्तरण गर्न सामग्रीको उपयोग गर्दछ। कम्पनीहरूले ब्लग, पोडकास्ट, भिडियो, ईपुस्तकहरू, न्यूजलेटरहरू, ह्वाइटपेपरहरू, जैविक खोजी, भौतिक उत्पादनहरू, सामाजिक मिडिया मार्केटि,, र सान्दर्भिक लक्षित दर्शकहरूमा पुग्न पदोन्नतीहरूको प्रयोग गर्दछ।
ब्रायन एक साथ प्रदान गर्दछ यो इन्फोग्राफिक इनबाउन्ड मार्केटिंग चेकलिस्ट २१ प्रमुख रणनीतिहरू प्रयोग गर्न जुन इनबाउन्ड मार्केटिंग रणनीतिहरूको प्रयोग गरेर तपाईंको व्यवसाय बढ्नेछ।
विस्तारित Point Point पोइन्ट चेकलिस्ट डाउनलोड गर्नुहोस्
इनबाउन्ड मार्केटिंगको साथ कसरी व्यवसायको विकासलाई तिलार्ने
ब्लगिंगको साथ मान सिर्जना गर्नुहोस् - व्यवसायहरू कि ब्लग प्राप्त % 77% बढी यातायात र %%% थप लिंकहरू त्यसो नगर्ने भन्दा।
यातायात ड्राइभ गर्न सोशल मिडिया प्रयोग गर्नुहोस् - 2.03 अर्ब सामाजिक मिडिया प्रयोगकर्ताहरू व्यवसायहरुलाई एउटा अविश्वसनीय नयाँ च्यानल दिनुहोस् यातायात ड्राइभ र नयाँ ग्राहकहरु खोज्नुहोस्.
अनलाइन फेला पार्न SEO प्रयोग गर्नुहोस् - अनलाइन अनुभवहरूको%%% एक # खोजी ईन्जिनको साथ शुरू गर्नुहोस्। जब तपाइँ तपाइँको साइट र खोज इञ्जिनहरूका लागि सामग्री राम्रोसँग अप्टिमाइज गर्नुहुन्छ, तपाइँ गर्नुहुन्छ तपाईको रैंकिंग बढाउनुहोस् र अधिक यातायात प्राप्त गर्नुहोस्.
अन्य व्यक्ति दर्शकहरूको लाभ उठाउनुहोस् - व्यवसायहरूaहेर्नुहोस् --देखि १ फिर्ताको जब तिनीहरूले अन्य साइटहरूमा प्रासंगिक दर्शकहरू भेट्टाउन र संलग्न गर्न सक्दछन्।
Retargeting र पीपीसी अनलाइन विज्ञापन सिर्जना गर्नुहोस् - retargeted आगन्तुकहरु हुन् 70% अधिक सम्भव छ रूपान्तरण गर्न तपाईको वेबसाइटमा।
कल टू एक्शनको साथ प्रत्यक्ष ट्राफिक - व्यापारहरूको 70% तिनीहरूको होमपेजमा कुनै उल्लेखनीय कल-टु-एक्शन छैन।
सामग्री अफरहरूको साथ मान सिर्जना गर्नुहोस् - प्रीमियम # सामग्री उत्पन्न गर्दछ धेरै गुणा तीन पटक परम्परागत आउटबाउन्ड मार्केटिंग को रूपमा र लागत %२% कम।
ल्यान्डिंग पृष्ठहरूको साथ आगन्तुकहरू रूपान्तरण गर्नुहोस् - सबै वेबसाइट क्लिकहरूको% 56% आन्तरिक पृष्ठमा निर्देशित छन्, गृह पृष्ठ होईन.
रूपान्तरणहरू बढावा दिन अप्ट-इन फर्महरू प्रयोग गर्नुहोस् - अप्ट-ईन # कारोबारको साथ व्यवसायहरू १००% ले रूपान्तरण दर बढाउनुहोस् अथवा धेरै!
विश्वसनीयता सिर्जना गर्न सामाजिक प्रमाण प्रयोग गर्नुहोस् - ग्राहक # समीक्षाले गर्न सक्दछ मार्केटिंग प्रभावकारिता% 54% बढाउनुहोस् किनभने Of 88% व्यक्तिहरू # समीक्षामा विश्वास गर्छन् अरू उपभोक्ताहरू द्वारा उनीहरूले व्यक्तिगत सम्पर्कबाट सिफारिसहरूमा विश्वास गरे।
लिड्स ट्र्याक गर्न ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन प्रयोग गर्नुहोस् - एक सीआरएम सक्छ प्रति बिक्री व्यक्ति प्रति राजस्व sales१% ले वृद्धि गर्नुहोस् जब लि track्क ट्र्याक र पोषण गर्न प्रयोग गरियो।
अधिक बिक्री बन्द गर्न ईमेल पठाउनुहोस् - ईमेल मार्केटिंगमा खर्च गरिएको प्रत्येक $ १ को औसत फिर्ती हुन्छ $ 44.25!
मार्केटिंग स्वचालन सेट अप गर्नुहोस् - स्वचालित नेतृत्व पोषण प्रक्रिया उत्पन्न गर्दछ १०% वा अधिक वृद्धि राजस्व केवल 6-months महिनामा।
बिक्री केन्द्रित सामग्री बनाउनुहोस् - % Of 61% सम्भावित कम्पनीबाट खरीद गर्न सकिन्छ जुन # सामग्री प्रदान गर्दछ।
शीर्ष च्यानलहरू फेला पार्न एनालिटिक्स प्रयोग गर्नुहोस् - +व्यापारहरूको 50% यसलाई गाह्रो लाग्छ विशेषता मार्केटिंग गतिविधि सीधा राजस्व परिणामहरूमा।
अद्भुत ग्राहक समर्थन छ - of 65% ग्राहकहरूले एउटा छोड्छन् एकल गरीब ग्राहक सेवा अनुभव!
सामाजिक मिडिया मा टिप्पणी बनाउनुहोस् - % Of 53% जो सोशल मिडियामा ब्रान्डहरू पछ्याउँछन् उनीहरू ब्राण्डका अधिक वफादार हुन्छन्।
वफादार ग्राहकहरुलाई पुरस्कार दिनुहोस् - यो लागत5पटक नयाँ ग्राहकहरु प्राप्त गर्न को लागी अधिक यो अवस्थित एक राख्नको लागि भन्दा। किन यो यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं तपाइँको वफादार ग्राहकहरुलाई पुरस्कृत गर्नुहोस् अधिकको लागि तिनीहरूलाई फिर्ता आउन राख्न।
निजीकरण ड्राइव स Eng्लग्नता को लागी प्रयोग गर्नुहोस् - व्यवसायहरु को वृद्धि देख्न बिक्रीमा २०% निजीकृत अनुभव र सुझावहरूको साथ ग्राहकहरु लाई तिनीहरुका सामग्री र उत्पादनहरु दिनुहोस्.
सर्वेक्षण र प्रतिक्रिया उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस् - यसले लिन्छ १२ सकारात्मक ग्राहक अनुभवहरू केवल लागि बनाउन को लागी १ नकारात्मक अनुभव। प्रतिक्रिया स्कलनले मद्दत गर्दछ मौका हटाउनुहोस् नराम्रो ग्राहक अनुभवको।
समीक्षा र प्रशंसापत्र संकलन गर्नुहोस् - अध्ययनहरूले देखाउँदछ70% उपभोक्ताहरू खरीद गर्नु अघि उत्पाद # समीक्षामा हेर्नुहोस्। सही समयमा समीक्षाको लागि ग्राहकहरूलाई सोध्नु, सिर्जना हुनेछ ब्रान्ड अधिवक्ताहरू कि नयाँ मानिसहरूलाई आकर्षित गर्दछ.
टैग: विश्लेषणदर्शकब्लगिंगब्रायन डाउनार्डकार्यलाई कल गर्नुहोस्कार्य गर्न कलच्यानलहरुसूची जाँच गर्नुहोस्चेकलिस्टरूपान्तरणकर्पोरेट ब्लगिविश्वसनीयतासीआरएमctaग्राहक वफादारीग्राहकसंगको सम्बन्ध व्यवस्थापनग्राहक समर्थनELIV8इमेल मार्केटिङप्रतिक्रिया उपकरणहरूइनबाउन्ड मार्केटिङइनबाउन्ड मार्केटिंग चेकलिस्टअवतरण पृष्ठ रूपान्तरणल्यान्डिङ पृष्ठहरूवफादार ग्राहकहरुमार्केटिंग स्वचालनप्रस्तावफार्म अप्ट-इननिजीकरणसमीक्षाबिक्री केन्द्रित सामग्रीएसईओसामाजिक संजालसामाजिक प्रमाणसर्वेक्षणप्रशंसापत्र
केवल साझा भन्न को लागी धन्यवाद भन्न को लागी र दयालु शब्दहरु!
सबै योग्य, ब्रायन!
नोभेम्बर,, २०१ at 5::2015 बिहान
यो चेकलिस्ट नोट हुनेछ। धेरै धेरै
नोभेम्बर २०, २००। 5::2015 अपराह्न
यसलाई मद्दत गर्छ आशा!
जनवरी 11, 2016 मा 8: 29 एएम
त्यो एक महान इनबाउन्ड मार्केटिंग सूची साझा छ।